Page-9 All Products - Hobby Carbon CNC Technology(Shenzhen) Limited
I-5mm yeCarbon Fiber Plate Panel Sheets Matte High Composite Hardness Material
I-3K yangempela yeCarbon Fibre yoPhahla lwePhepha
5.0mm Composite Ukuqinisa Material Anti-UV carbon fiber sheet
Ipaneli yeBhodi yePlati yePlati yePlati ye-3K epheleleyo
Ubunzima obuKhulu bezinto ezihlanganisiweyo zeCarbon Ford
Thenga iiphaneli zeCarbon fiber
uyifaka njani i-carbon fiber esonge ngaphakathi
Yintoni ipleyiti yecarbon fiber
ibhodi yokulala yecarbon fiber
umaleko kunye nethafa leCarbon Fibet Sheet yeAV
I-3K Iingubo zokuLwa kwiKharbon Fibre yeKhitshi
Ukusika i-CNC kwiCarbon Fibet Sheet / Plate / Board / Panel
Umkhwa oShicilelweyo weKhabhoni yeKhabhoni
Ikhabhathi yepleyiti yeKhabhoni yeCarbon Fibre
Ubungakanani be-OEM ubungakanani bebhabheli yeBarbon
Amaphepha aqinileyo e-Carbon Fiberi Matte ukupeyinta ukugqibezela
ibhanti emileyo yomfazi ejikeleze imoretroli eyi-m3
I-M2 spacer yabasetyhini edityaniswe ngentambo ejikeleze i-aluminium signoff
I-M3 Aluminium Standoff Anodised Round Spacer
M2 M3 M4 M5 M6 ujikeleze i-7075 ye-aluminium ekumile
I-M2X20mm Round aluminium emile okuma kombala wesakhelo seRC
Ukushisa ukumelana ne-carbon sheet sheet yangempela yecarbon Inkcazelo : Iplate epheleleyo yeCarbon Fibre Iinkcukacha zexabiso : ixabiso lixhomekeke kuyilo nobungakanani. Ukukhumbula : pls usithumelele umzobo (.dxf fayile / .step file) Kufuneka sazi ubungakanani bakho kunye nobukhulu :) Ifayibha ekhethekileyo...
Ukushisa ukumelana ne-carbon sheet sheet yangempela yecarbon Inkcazo: Full Carbon Fiber Plate Iinkcukacha zexabiso : ixabiso lixhomekeke kuyilo nobungakanani. Ukukhumbula : pls usithumelele umzobo (.dxf fayile / .step file) Kufuneka ukwazi ubungakanani yakho ubukhulu :) Ifayibha ekhethekileyo edityaniswe nekhabhoni....
Ukushisa ukumelana ne-carbon sheet sheet yangempela yecarbon Inkcazo: Full Carbon Fiber Plate Price iinkcukacha: ixabiso ixhomekeke kuyilo kunye nobungakanani. Ukukhumbula : pls usithumelele umzobo (.dxf fayile / .step file) Kufuneka ukwazi ubungakanani yakho ubukhulu :) A ifayibha ekhethekileyo yakhiwa carbon....
Ukushisa ukumelana ne-carbon sheet sheet yangempela yecarbon Inkcazelo : Iplate epheleleyo yeCarbon Fibre Iinkcukacha zexabiso : ixabiso lixhomekeke kuyilo nobungakanani. Ukukhumbula : pls sithumele umzobo (.dxf fayile / .step file) Kufuneka sazi ubungakanani bakho kunye nobukhulu :) Ifayibha ekhethekileyo edityaniswe...
Iiphaneli zekhabhoniboni Apha ngezantsi kukho izibonelelo zematshini ye- CNC: (1) Isixa esikhulu sokwehliswa kwenombolo yokusetyenziswa kwesixhobo, kwaye iinxalenye ezinobunzima zamacandelo azifuni isixhobo esinzima. Ukuba sifuna ukutshintsha imilo nobungakanani bamacandelo, kuyimfuneko ukuguqula inkqubo yokuqhubekeka...
Ukomelela okuphezulu kwe-3k Carbon Fiber Plate / Sheet Apha ngezantsi kukho izibonelelo zematshini ye- CNC: (1) Isixa esikhulu sokwehliswa kwenombolo yokusetyenziswa kwesixhobo, kwaye iinxalenye ezinobunzima zamacandelo azifuni isixhobo esinzima. Ukuba sifuna ukutshintsha imilo nobungakanani bamacandelo, kuyimfuneko...
Yintoni ipleyiti yecarbon fiber Apha ngezantsi kukho izibonelelo zematshini ye- CNC: (1) Isixa esikhulu sokwehliswa kwenombolo yokusetyenziswa kwesixhobo, kwaye iinxalenye ezinobunzima zamacandelo azifuni isixhobo esinzima. Ukuba sifuna ukutshintsha imilo nobungakanani bamacandelo, kuyimfuneko ukuguqula inkqubo...
ibhodi yokulala yecarbon fiber Apha ngezantsi kukho izibonelelo zematshini ye- CNC: (1) Isixa esikhulu sokwehliswa kwenombolo yokusetyenziswa kwesixhobo, kwaye iinxalenye ezinobunzima zamacandelo azifuni isixhobo esinzima. Ukuba sifuna ukutshintsha imilo nobungakanani bamacandelo, kuyimfuneko ukuguqula inkqubo...
Bonelela ngokuthe ngqo kwi-M3 Round Aluminium HobbyCarbon Standoff Intshayelelo yeMveliso I-aluminium standoff ihlala ithathwa njengohlobo olunye lokuqina kwealuminium. Ihlala isetyenziselwa i-Drones / Fpv / Uav, ishishini kunye nasekhaya. Ikholam ye-aluminium standoff ikwabizwa ngokuba yi-rivet Stud okanye ikholamu...